Mogadishu Journal » Usain Bolt oo taariikh cusub dhigay
Mjournal :–Usain Bolt oo ah orodyahanka ugu dheereeya caalamka ayaa taariikh cusub dhigay kaddib markii uu markii saddexaad ee isku xigta uu ku guulaystay tartanka 100m ee Olympic-ada Adduunka.
Orodyahankan u dhashay dalka Jamaica ayaa ka hormaray ninka ay aadka u xifiiltamaan ee u dhashay dalka Mareykanka ee Justin Gatlin.
Ciyaaryahankan ayaa ku orday 9.81 ilbiriqsi, waa wax ka yar 10 ilbiriqsi.
Bolt, oo ah 29-jir, ayaa sidaa markiisii saddexaad ee isku xigta ugu guulaystay billadda dahabka ee tartanka 100m ee Olympicada Adduunka, iyadoo uu horay ugu soo kala guulaystay Olympic-adii Adduunka ee 2008-dii lagu qabtay Beijing iyo middii London 2012.
Orodyahankan ayaa ku sii jira tartanka oo waxa uu doonayaaba inuu markiisii saddexaad oo xiriir ah uu ku guulaysto tartamada 200m iyo midka 400m ee qori isu dhiibka.
Bolt ayaa waxa uu BBCda u sheegay inuu rajaynayay inuu aad u dheereeyo hasayeeshee uu ku faraxsan yahay inuu guulaystay.
Goor sii horreysayna orodyahanka u dhashay dalka Koonfur Afrika ee Wayde van Niekerk ayaa ku guulaystay orodka 400m ee ragga, isagoo halkaana ku dhigay rikoor cusub kaddib markii uu orday 41.03 ilbiriqsi.
Teenisyahanka reer Britain ee Andy Murray ayaa isna ku guulaystay billaddii labaad ee dahab ah ee isku xigta Olympicada Adduunka.